အရမ်းနာမည်ကြီးနေတဲ့ L’Oreal ရဲ့ Essence – YANGON STYLE
အရမ်းနာမည်ကြီးနေတဲ့ L’Oreal ရဲ့ Essence
လတ်တလောလူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာထက်မှာ အလွန်နာမည်ကြီးနေတဲ့ Beauty Product တစ်ခုရှိတယ်..။ အဲ့ဒီ Product က တခြားတော့မဟုတ်ဘူး..။ L’oreal ရဲ့ Essence ဖြစ်ပါတယ်။ အတိအကျဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ Revitalift Crystal Micro-Essence နဲ့ Revitalift Micro-Essence ဆိုပြီး ၂မျိုးထွက်ရှိထားပါတယ်။
ခွဲခြားပြီးပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ Revitalift Micro-Essence ဆိုတာ အသားအရေခြောက်သွေ့သူတွေအတွက်ဖြစ်ပြီး ဘူး အနီရောင်နဲ့ ရောက်ပါတယ်။ Revitalift Crystal Micro-Essence ကတော့ အဆီပြန်တဲ့သူတွေအတွက်ဖြစ်ပြီး ဘူးအဖြူရောင်နဲ့ လာပါတယ်။ ၀က်ခြံသမားတွေလည်း အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။
Toner-Type Essence ဖြစ်တဲ့အတွက် Toner အနေနဲ့ ဂွမ်းအသုံးပြုပြီး လိမ်းလို့ရသလို Toner လိမ်းပြီးသွားရင် Essence လိမ်းပေးလိုက်ရင်လည်း ရပါတယ်။
ကဲ… Revitalift Crystal Micro-Essence နဲ့ Revitalift Micro-Essence တို့ရဲ့အကြောင်းကိုပြောရအောင်..။
သူတို့က ဆေးမြင်းခွာရွက်နဲ့ ဖော်စပ်ထားတယ်လို့သိရတယ်။
ဆေးမြင်းခွာရွက် က ဘယ်လိုတွေ စွမ်းသလဲ??
ဆေးမြင်းခွာရွက်ဟာ ၀က်ခြံတွေကိုပျောက်စေတယ်။ ၀က်ခြံကြောင့် နီမြန်းလာတဲ့ အသားအရေကို အေးမြစေတယ်။ sensitive skin သမားတွေအတွက်လည်း သင့်တော်တယ်။ အသားအရေထဲမှာရှိတဲ့ Collegen ထုတ်မှုနှုန်းကို မြှင့်စေတယ်။ Micro-Essence Water ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာ အမှန်တကယ်ကို သေးငယ်တဲ့ Micronized Water ဖြစ်လို့ အသားအရေရဲ့ ဟိုးအတွင်းပိုင်းထဲကို လျင်မြန်စွာစိမ့်၀င်စေနိုင်တယ်။
Revitalift Crystal Micro-Essence Water ဟာ
~ ဖြူဝင်းကြည်လင်တောက်ပတဲ့ အသားအရေကိုရရှိစေတယ်
~ အသားရေရဲ့ အရေပြားအလွှာ (၁၀) လွှာထိ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်တယ်
~ အသားရေကို ချောမွေ့ နူးညံ့ပြီး ကြည်လင်တောက်ပလာစေပါတယ်။
~ အရေးကြောင်းလေးတွေကိုလည်း လျှော့နည်းစေပါတယ်။
နေ့တိုင်း ဂရုတစိုက်သုံးပေးမယ်ဆိုရင် အမည်းစက်လေးတွေ ပျောက်သွားပြီး အသားအရေ ကြည်ကြည်လေးဖြစ်လာမှာပါ၊
By : Theingi Kyaw
ချစ်သူသက်တမ်း ရှစ်လအကြာမှာ စေ့စပ်ခဲ့တဲ့ Brooklyn Beckham နဲ့ ချစ်သူ Nicola Peltz
Lotteria ရဲ့ ကြက်ကြော် Promotion
Touch In Sol ရဲ့ Happy Monsoon Promotion
အထက်တန်းအဆင့် ကျောင်းသားကျောင်းသူများကို Social Distancing လိုက်နာကာ ယနေ့ ကျောင်းအပ် စလက်ခံမည်
June 20 မှာကျင်းပမည့် Mobile legend MPL MM play-off
Zoom application ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲ
တောင်တွေကာရံထားတဲ့အင်းထဲမှာအများနဲ့မတူကယက်လှော်ကြမယ် Kayaking In The Inle Lake🚣‍♂️
3. ဟော့ပေါ့နဲ့ အကင်ကို ၇၇ဝဝ ဆိုလို့သွားစားခါမှ မျက်လုံးပြုးပြီးပြန်လာရတဲ့အဖြစ်
4. ရန်ကုန်ရဲ့ အလှပဆုံး ကော်ဖီဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ကို ရှာနေပါသလား ဒါဆိုရင်တော့ ဒီနေရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်
5. JLPT စာမေးပွဲများကို လွယ်လွယ်ကူကူ ဖြေဆိုအောင်မြင်နိုင်ရန် 👩‍🎓